20 Bosphorus တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းခွန်ကောက်ခံမှုများ - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ထိုအချိန်ကာလ၏ Bosphorus တံတားနှင့်အဝေးပြေးခွန်ကောက်ရာခိုင်နှုန်းကို 20
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ထိရောက်သော7ဖြစ်ရန်အတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခအနေဖြင့်ယနေ့ကနေအဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (KGM) (အောက်တိုဘာလ 20) ပျမ်းမျှအချိန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဝေးပြေးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခ720 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျမ်းမျှအားတိုးမြှင့်အောက်တိုဘာလကနေအကျိုးသက်ရောက်နှင့်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ Bosphorus တံတားဟာ Lire တစ်ပြားကနေကားတွေ 8 75 များအတွက်ဖြတ်သန်းခ, တစ်ပြား 10 50 ပေါင်သွားလေ၏။
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (KGM), လျှော့ရေးသားထားသောကြေညာချက်အရသိရသည် tolls said: "ကားလမ်းပေါ်ကားများအတွက် POUNDS3အဆိုပါအနီးဆုံးအကွာအဝေးအခကြေးငွေ, အအဝေးဆုံးအကွာအဝေးအခကြေးငွေ 30 ပေါင်ကားတစ်စီး 10,50 tolls စဉ်အခါ, Bosphorus တံတားပေါင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်နေ့တံတားနှင့် Fatih Sultan Mehmet တံတားသေဆုံးသူအကောက်အခွန်ယာဉ်များများအတွက်အသေးနှစ်ခုရိုး 3,20 ပေါင်ကနေ wheelbase 10 မီတာ wheelbase 3,20 မီတာနှင့် 3,20 မီတာကြီးတွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီလွန်နိုင်ပြီး Two-ရိုးမော်တော်ယာဉ်များအဘို့အ 13,50 အမျိုးမျိုးတို့ကိုသည်းမနိုင်လျှင်,3မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆိုင်ကယ်အဘို့ရိုး 29,50 မှမော်တော်ယာဉ်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ရိုး 4,5နှင့် 58,756ရိုးများအတွက်မော်တော်ယာဉ်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပြင် 78,25 4,25 ပေါင်နှင့်ကိုတက်။ "
အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 33 PERCENT ငွေဖောင်းပွမှုအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးမဟုတ်ပါသျောလညျးအချိန်
ရည်ရွယ်ချက်နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလုပ်ဆောင်ဖို့ထိန်းချုပ်ထားကားလမ်းနှင့် Bosphorus တံတား၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်ဖော်ပြသည့်ဝတ်လစ်စလစ်ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာအဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (KGM) 'အချိန်အကြောင်းမရှိ, အထုတ်လုပ်သူဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်း (PPI) အညီဖြတ်သန်းခ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကြေညာချက်မှာတော့ 33,64 21 ရာခိုင်နှုန်းသာကြောင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုရှိနေသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြတ်သန်းခတစ်လ၏အသိပညာတိုးပွားစေဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဟုအဆိုပါ Bosphorus တံတား၏ကြီးမားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Making, အလုပ်သမားများနှင့်ပစ္စည်းများစိတျထဲတှငျလမ်းစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်များ၏ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အလို့ငှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် operating ကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းနှင့်အတူချီးမြှောက်ခြင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားပေါ်တွင်သေဆုံးသူအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်၏အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်အပေါ်မြင့်တက်" ဟုအဆိုပါကြေညာချက်, ထုတ်ပြန်ချက်များအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာလိုက်သည်ကြီးပြင်း Bosphorus တံတားလမ်းသုံးခများ 01 / 01 / 2018 အဝေးပြေးဖြတ်သန်းခနှင့်ဇန်နဝါရီလ 1 2018 00 အတွက် Bosphorus တံတားနာရီတနင်္လာနေ့: 00 ထံမှတရားဝင်ဖြစ်ဖို့ကျန်နေသေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ access ကိုထိန်းချုပ်ထားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် Bosphorus တံတားကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတိုတောင်း-စီးပွားရေး, လုံခြုံခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး option ကို, ထိုဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုမှန်မှန်ဖျော်ဖြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှစ်ပေါင်းများစွာအစေခံနိုင်စွမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဇန်နဝါရီလ 15 1 အခကြေးငွေကတည်းကအကောင်အထည်ဖော်အသစ်တခုဖြစ်လျက်ရှိအတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်ဇူလိုင်လ 2017 အာဇာနည်နေ့နှင့်အကူးအပြောင်းအတွက် Fatih Sultan Mehmet တံတားတစ်ဦးပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှု updated ခံရဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုလျှောက်လွှာ; သူတို့အားယခင်ကလုပ်ကွဲပြားမှုအရနည်းလမ်းပါဝင်သည် ...
အစ္စတန်ဘူလ် 48 ရာခိုင်နှုန်းကို ZAMLANDI အတွက် Bosphorus တံတား 02 / 01 / 2017 အစ္စတန်ဘူလ် 48 ရာခိုင်နှုန်းကို ZAMLANDI အတွက် Bosphorus တံတား: ဖြတ်သန်းခအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လည်ချောင်းတံတားအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကားကို7သေဆုံးသူပေါင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနေကြေညာချက်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ 1 2017 00.00 နာရီကနေတံတားနှင့်ကားလမ်းသေဆုံးသူ၏လည်ချောင်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတရားဝင်ဖြစ်ဖို့ဖော်ပြထားခဲ့။ အဆိုပါ Bosphorus တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, လက်ရာလက်နှင့် 2017 ဇန်နဝါရီလ3ဖြတ်သန်းခကတည်းကအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိစဉ်းစားလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းချက် PPI မှုနှုန်းအတွက်စျေးနှုန်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် 2016 တစ်နှစ်အတွင်းတိုးနှင့်အတူပစ္စည်းတန်းကိုလုပ်သကဲ့သို့ကိုးကားအသစ်တစ်ခုအစီအစဉ်ရှင်းပြချက်ပြုသောအမှု, ပါဝင်သည် ...
Erciyes နှင်းလျှောစီးအခကြေးငွေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီအခြိနျ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်း! 05 / 09 / 2019 Erciyes အချိန်တွင် Cableway 40 ရာခိုင်နှုန်းအခကြေးငွေ! .. CHP အမြင့်စည်းကမ်းဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Orhan ဘတ် Yelda, cable ကိုကားတစ်စီးစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်အနီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ Erciyes မှာ 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Orhan အဆိုပါတိုးမြှင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ရှိမရှိညွှန်ပြသူနှင်းလျှောစီးအဘို့သူ့ရဲ့အချိန်ကိုသတိထားမိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Erciyes အဖြစ်တိုးမြှင့်ကြေညာချက်ဘတ် Yelda Orhan, 'ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုလုပ်က' 40 ရာခိုင်နှုန်းအနီးကပ်အချိန် Kayseri Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကဒီအားလပ်ရက်စတင်ဆောင်းတွင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအလေးအနက်ထိုးနှက်ဖြစ်ပါသည်, cable ကိုကားတစ်စီးခဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ '' သူကပြောခဲ့သည်။ Kayseri လည်း $ 800 က Round ခရီးစဉ်လက်မှတ်များ မှစ. လေယာဉ်ခရီးစဉ် Orhan, Kayseri-အစ္စတန်ဘူလ်-Kayseri အပေါ်အပေးအယူအမြင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူတွေ့ရှိခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဤကိုချယိ ...
Haliç Metro ရွှေ့ပြောင်းစီမံကိန်းကိုဗိသုကာပညာရှင် Hakan Kiran: အ Bosphorus ၏ယိုစိမ့် 85 ရာခိုင်နှုန်းကို 11 / 11 / 2013 Haliç Metro ရွှေ့ပြောင်းစီမံကိန်းကိုဗိသုကာပညာရှင် Hakan Kiran: အ Bosphorus ၏ 85 ယိုစိမ့်ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ သော Bosphorus အတွက်အဆောက်အဦးများ၏တရားမဝင် 85 ရာခိုင်နှုန်းကိုသတိပြုမိဇန်နဝါရီလHaliç Metro ရွှေ့ပြောင်းစီမံကိန်းဗိသုကာ Hakan Kiran အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် "အလုပ်လုပ် A ကောင်းဆုံး silhouette ။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့လည်းသွားပါသင့်ပါတယ်" ဟုသူကအစ္စတန်ဘူလ်၏ Marmaray ဖွင့်လှစ်သည့်အသွားအလာHaliç Metro ေူပာင်းလဲရေးစီမံကိန်း '' ရှူဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးနောက်ကပြောပါတယ် ဗိသုကာ Hakan Kiran နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးစီမံကိန်းများကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရှိအခြားစီမံကိန်းများကဲ့သို့ကောင်းစွာပြောဆိုသော။ သငျသညျHaliç Metro Crossing တံတားစီမံကိန်းကိုကျယ်ပြန့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဖွင့်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်နည်း အဆိုပါ cooker ဖွင့်လှစ်ပြုလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်ပြီးဟောင်း, လူများစွာစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ '' သူတို့ကပြောပါတယ် "ပိုကောင်းပါပြီနိုင်ပေမယ့်ဖြစ်သင့်သည်ကိုမည်သို့ ...
ကြေညာလိုက်သည်ကြီးပြင်း Bosphorus တံတားလမ်းသုံးခများ
Haliç Metro ရွှေ့ပြောင်းစီမံကိန်းကိုဗိသုကာပညာရှင် Hakan Kiran: အ Bosphorus ၏ယိုစိမ့် 85 ရာခိုင်နှုန်းကို
အဆိုပါအနစ်နာခံအားလပ်ရက်အခမဲ့၏ပွဲများတွင်ကားလမ်းနှင့် Bosphorus တံတား